Shina 50MM / 55MM / 63MM Herb Grinder 4 Piece Zinc Alloy Spice Crusher Manufacture and Factory | Hemgrinder
FAHAMARINANA DRY HERB GRINDER, GRINDS SMOOTHLY - Vary mason-tsolika voatoto ho an'ny mason-tsolika vita amin'ny ravina maina sy maintso. Adidy mavesatra sy fahaiza-manao mahery vaika no mahavita mitoto rivotra! Ny fikosoham-bary mavesatra 4 sy ny vy vita amin'ny vy 3 dia manome antoka fa tsy hamoy ny ahitra ianao.
Color: Grey / mainty / maitso / manga / mena / volafotsy
Habe (Diameter x Haavo): 2 x 1.57 santimetatra (50 x 40mm)
2.2 x 1,57 santimetatra (55 x 40mm)
•FAHAMARINANA DRY HERB GRINDER, GRINDS SMOOTHLY - Vary mason-tsolika voatoto ho an'ny mason-tsolika vita amin'ny ravina maina sy maintso. Adidy mavesatra sy fahaiza-manao mahery vaika no mahavita mitoto rivotra! Ny fikosoham-bary mavesatra 4 sy ny vy vita amin'ny vy 3 dia manome antoka fa tsy hamoy ny ahitra ianao.
• TEETH RAZOR-SHARP METAL, GRIND INDRINDRA - Ity mazoto platinina namboarina avy amin'ny metaly vy akora sy mateza. Ny fikosoham-bary Sharp Teeth dia miantoka anao malefaka milay sy mahomby tsara. Voarohirohy ahitra maina.
• FITAAN-TSARA TSARA TSY MISY ZAVATRA TSY MISY AZONAO, FIVORIANA FENO LASA - Ity fikotronana platinum ity dia milina ahitra maina miaraka amin'ny Pollen Scraper dia natao fitaovana matanjaka sy avo lenta izay manome antoka tsara ny fahombiazana sy ny faharetana.
• ULTRA STRONG LID MAGNET, LESS WASTE - Ny mazoto eo an-tampon'ity fikosoham-bary ity dia mihazona mafy, ny rakotra magnetika dia manampy betsaka amin'ny fampihenana ny fandaniana. Tsy toy ny ravina ravina mihintsana mora foana ilay rakotra rehefa miasa. Ity fikosoham-bary maina ity miaraka amin'ny mazoto mahery dia mitazona tsara ny sarony eo amin'ny toerany. Io crusher grinder io dia mora mihodina ary tsy manamboatra feo metaly manelingelina.
• TOLIKA SORATRA, GRINDER CUTE TRAVEL GRINDER - Famatotra platinum metaly ao am-paosinao, Tonga amin'ny mpanam-bolam-bary, tena mety, milina famoretana lehibe ho an'ny zazavavy. Raha mieritreritra ianao fa hanana nenina aorian'ny fividianana ity vokatra ity, aza matahotra fa ity no tena mifangaro tsara indrindra azonao vidina.
• FOTOTRA AZA MISY AZONAO ARY MAMPIKAOKA - Ity famotahana ravina crusher ity dia manampy amin'ny famonjena anao amin'ny fotoana satria tena mora ampiasaina. Ahodino fotsiny ny tampony etsy sy eroa mandritra ny fotoana maromaro. Ambonin'izany, ny fikosoham-bary dia mora mihazona, madio fotsiny, mampiasa savony sy rano ary ny scraper dia afaka manampy amin'ny fanesorana ny vovobony amin'ny vovobony.